ngu admin nge-20-06-18
Inkampani yethu ayithathi ingqalelo kwimizamo yabasebenzi kuphela, kodwa kwimpilo yomzimba neyengqondo yabasebenzi. Umzekelo, inkampani yethu iya kulungiselela ukuhlangana kwezemidlalo ukuvumela abasebenzi ukuba basebenze. Kunyaka ophelileyo, bonke abasebenzi bathatha inxaxheba kwezemidlalo. Ngexesha lokudibana kwezemidlalo, simisele ...
INkomfa eNtsha yokuNcomeka kwabasebenzi ka-2019
Ingqungquthela ebalaseleyo yabasebenzi kwi-2019 2020/6/15, inkampani yethu ibambe iNkomfa eNqabileyo yaBasebenzi ye-2019 Ngexesha lenkomfa, okokuqala, umphathi wethu uMnu. Umthamo wokuthengisa womatshini otyibilikayo une ...
Siyavuyisana kwiwebhusayithi entsha ye-Hangzhou Hongli Machchan Co, Ltd.
ngu admin nge-20-06-17
Inkampani yasungulwa ngo-Agasti ka-2002 kwaye okwangoku banabasebenzi abangaphezu kwama-70 kunye namaziko obugcisa ayi-8. Inkampani ifumaneka kwiLinpu Town Industrial Park, Xiaoshan, Hangzhou City, kwiPhondo le-Zhejiang, nekhilomitha enye ukusuka kwindawo yokuphuma kweLinpu kwiHangjinqu Highway ...